के हो थाइराइड ? | Hamro Doctor info@hamrodoctor.com
के हो थाइराइड ? सन्दर्भ : विश्व थाइराइड दिवस Home
70.4K5comments
By डा.प्रियादर्शनी योन्जन थाइराइड भन्ने बित्तिकै धेरै मुख बार्ने ठुलो रोग हो भन्ने आम धारणा छ । त्यसकारण थाइराइडका रोगीहरुमा बन्दा, काउली जस्ता विभिन्न खानेकुरा बार्ने गलत धारणा विद्यमान छ । थाइराइड आफैंमा रोग नभई एउटा ग्रन्थी हो । यो हाम्रो घाँटीको अगाडीको भागमा हुन्छ । थाइराइड ग्रन्थीले थाइरोक्सिन टी.३ र ट्रइआयोडो टी ४ हाम्रोन उत्पादन गर्छ । त्यहि उत्पादित हार्मोनले नै हाम्रो शरीरको अंगको क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । यसको दुई अवस्थालाई हाइपर र हाइपो थाइरोडिज्म भनिन्छ । थाइराइड ग्रन्थीले शरीरमा अत्यधिक हार्मोन उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई हाइपर थाइरोडिज्म भनिन्छ भने शरीरमा चाहिने भन्दा कम हार्मोन उत्पादन गर्ने अवस्थालाई हाइपो थाइरोडिज्म हो ।
थाइराइडको मुख्य काम शरीरको मेटाबोलिजम नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । जब थाइराइड ग्रन्थिको प्रणलीमा अबरोध उत्पन्न हुन्छ त्यस बेला शरीरमा विभिन्न समस्या देखिन थाल्छ । यसरी शरीरमा हर्मोन घटबढ हुँदा देखिने असर नै थाइराइड हो । थाइराइड ग्रन्थीको समस्या पुरुषमा भन्दा महिलामा तुलनात्मक रुपमा बढी देखिन्छ । तथ्याङ्क अनुसार एक हजार जना महिला मध्य ४ जना महिलामा यो समस्या देखिने हुन्छ । थाइराइड ग्रन्थीले शरीरको हरेक क्रियाकलापको नियन्त्रण गर्ने हुँदा यसललाई शरिरीको एक्सिलेटरसमेत भनिन्छ । यो शरीरको आफ्नै कारणले हुने रोग हो । यस बाहेक पनि यो रोग लाग्नु अरु केही कारणहरु पनि हुन्छन् । थाइराड सर्जरी गरेको अवस्था, रेडियसन थेरापी गरीएको अवस्था र वंशाणुगत कारणले पनि थाइराइडको समस्या देखा पर्छ । थाइराइडका लक्षण
–महिनावारी अनियमित हुने । –छाला तथा अनुहार फुस्रो देखिने ।
–थाइराइड हार्मोनको रक्त परीक्षण गराउने । समयमै रोगको पहिचान भइ उपचार गरे यस रोगबाट बच्न सकिन्छ । लामो समयसम्म निदान नभएर एक्कासी बेहोस वा विषाक्त प्रभाव परेमा यसबाट बिरामी मृत्युको सम्भावना ५० प्रतिशत रहन्छ । समयमा उपचार नगरेमा हाइपर थाइराइडिज्मले मुटु र मस्तिष्कमासमेत असर गर्छ । अल्का अस्पतालस्थित काठमाण्डौं डाइबिटिज एण्ड थाइराइड सेन्टरमा कार्यरत डा. योन्जनसँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।
Chandra gurung on Wed, May 17 2017 05:55 PM
Sabina on Mon, Nov 21 2016 06:06 PM
Sarmila thapa on Mon, Nov 21 2016 02:46 PM
Dr. Priyadarshini Yonzon Rajbhandary